Apple waxay cusboonaysiisay AirPods, AirPods Pro iyo AirPods Max | IPhone News
louis padilla | 10/05/2022 22:12 | Qalabka IPhone, Noticias
Apple ayaa bilaabay a Cusboonaysiinta firmware cusub oo loogu talagalay taleefoonnada gacanta ee wireless-ka oo dhan sidaas darteed la gaaro nooca cusub ee 4e71.
Haddii aad haysatid qaar ka mid ah AirPods, waxaad haysataa cusboonaysiin cusub oo la heli karo si aad u cusboonaysiiso. Gaar ahaan, Apple waxay soo saartay nooc cusub oo firmware ah AirPods 2 iyo 3, AirPods Pro, iyo AirPods Max, oo ka tagaya kaliya jiilkii ugu horreeyay ee AirPods, kuwaas oo aan iib ahayn muddo dheer. Firmware-ka cusub waxaa lagu magacaabaa 4e71, waxaana si toos ah loogu rakibi doonaa sameecaadahaaga. Apple inta badan ma bixiso tafaasiil ku saabsan casriyeynta taleefannada dhegaha la gashado, wakhtiganna maaha mid ka reebban caadada, markaa wakhtigan ma naqaanno mid ka mid ah wararka la socda casriyeyntan.
Sida loo ogaado nooca firmware-ka ay AirPods-kaagu leeyihiin? Way fududahay in la ogaado, kaliya waa inaad ku xidhaa AirPods-ka, nooc kasta oo uu yahay, iPhone ama iPad-kaaga, iyo gudaha Settings, qaybta guud iyo gudaha liiska macluumaadka, waxaad hubin kartaa nooca firmware-ka lagu rakibay. Waa lama huraan in AirPods-yada ay ku xiran yihiin Bluetooth, haddii kale shayga menu kama soo muuqan doono shaashadda.
Sidee loo sameeyaa cusbooneysiinta AirPods? Ma jirto hab lagu bilaabo casriyeynta gacanta, markaa waa inaad sugtaa firmware-ka cusub si uu u soo dejiyo madaxa madaxa oo rakibo. Sida kaliya ee lagu dedejin karo hawsha waa in la dhigo AirPods kiiskooda, la saaro oo la furo kiiska si loogu xiro iPhone ama iPad kaaga, habkan ayaa u muuqda in soo dejinta cusbooneysiinta ay tahay mid degdeg ah.
Ma cusbooneysiisay AirPods-kaaga? Miyaad dareentaa wax isbeddello ah kadib rakibidda firmware-ka cusub? Hagaag, faallo kaga tag wararka aad awooday inaad ogaato. Waxaan daabici doonaa macluumaadka isla marka aan ogaano wax badan oo ku saabsan nuqulkan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay cusbooneysiisaa AirPods, AirPods Pro iyo AirPods Max
Cusbooneysii ugu dambeysay jiilkii ugu horreeyay ee hawada hawada lagu dallacay, kaasoo gubay baytarigii. Way sii dayn karaan firmware-kan sidoo kale si ay isugu dayaan inay hagaajiyaan.
Waxaan aad uga baqayaa in haddii aysan ku jirin cusboonaysiintan ama kan ku xiga ee aan dhawaan iibsaday aaladaha hawada sare ee jiilka labaad in la dalaco. Haddii ay mar kale dhacdo waxaan ka tagi doonaa deegaanka iphone weligeed. Dulqaadkayga ayaa durba aad u hooseeya.